वाइकिंग देवताहरु मा 20 फ्रिन्स: थोर र लोकी
बोनसको म्याद सकिन्छ: जुलाई 22, 2018
एक भगवान तल ओर्लनुभयो
परमात्मालाई भेट्न आफ्नो उपहार दावी गर्नुहोस्!
अनौंठो समय हामी साक्षी दिइरहेका छौं, मेरो साथी! युगौंदेखि, म, जs्गलको आत्माले शान्ति र सद्भावमा जंगलको सीमाको रक्षा गर्दैछु, तर यस्तो अपमानजनक लामो समय देखि देख्न सकिंदैन। एक स्कान्डिनेभियाली देवता, मानिसहरु उनीहरुलाई थोर भन्छन्, म विश्वास गर्दछु, पृथ्वीमा आइसकेको छ, प्रेमको प्रयासहरुमा पूरै व्याकुल। त्यो क्षणदेखि, मैले सबै महिला प्राणीहरू यस टेस्टोस्टेरोनले भरिएको मान्छे द्वारा पीछा गरेको देखेको छु। र अहिले पनि एक गरिब मत्स्यांगनाको आक्रमणमा छ। तपाईं उसलाई बचाउन वा Thor उनको साथ रोमान्टिक सम्बन्ध बनाउन मदत? एक जम्मा उपहार सक्रिय गर्नुहोस् र सही छनौट गर्नुहोस्:
4. झाडी पछाडि लुकाउनुहोस्।
फेडस्पिनहरू हँसिलो नभए सम्म 22.07.2018 23: 59 GMT 0
फ्री स्पिन दुवै पीसी र खेलकुद मोबाइल संस्करणमा उपलब्ध छन्। प्रत्येक स्पिन लायक छ 0.3 usd / eur / aud / cad,3sek / nok / cny, 15 रक्सी, 30 jpy, तपाईंको खाता मुद्रामा निर्भर गर्दछ। 20x wagering सँग नकद बोनसको रूपमा नि: शुल्क स्पिनमा भएका प्यानहरू तुरुन्तै तपाईंको बोनस ब्यालेन्समा देखा पर्नेछ।
वाइकिंग देवताहरु मा 20 फ्रिन्स: थोर र लोकी अपडेट गरिएको: जुलाई 23, 2018 लेखक: Damon
20 फ्रिस्पिनहरू वाइकि inमा ...